Bubata ozi-e Thunderbird na Kmail | Site na Linux
Bubata ozi-e Thunderbird na Kmail
Ọ bụghị oge mbụ m na-eji KDE, n'ezie nzọụkwụ mbụ m na GNU / Linux ọ dị ihe dị ka Debian Etch con KDE 3.x, na otu nke ngwa na-amasị m ihe banyere nke a Ebe obibi Desktọpụ es Kmail onye ozi gi.
Ihe bụ, M na-eji Thunderbird ya na akaụntụ POP na ọ dị m mkpa ịnweta ozi ịntanetị m niile Kmail. Usoro a dị mfe ma na nsonaazụ ya mara mma. Olee otu anyi si eme ya?
1- Anyị na-emeghe Kmail ma melite akaụntụ anyị.
2- Ozugbo emechara usoro a, anyị ga-eme ya Faịlụ »Bubata Ozi. N'ebe ahụ, anyị na-ahọrọ nhọrọ: Mbubata ozi ịntanetị na folda Ọdịdị si Thunderbird / Mozilla.
3- Anyị na-aga nzọụkwụ ọzọ site na ịpị: Ọzọ na ọkachamara na-akpaghị aka na-achọpụta folda ahụ .nke nke anyi / n'ụlọ. Anyị nwere ike ịhọrọ folda ahụ zuru ezu, ma ọ bụ anyị nwere ike ịchọ ruo mgbe anyị chọta folda ahụ mail.
4- Ọkachamara ahụ malitere idetu maka folda ọhụrụ, ozi niile na folda ha kwekọrọ. Anyị na-eche ka ọ gwụ na ọ bụ ya. Anyị ga-ahazi ma bugharịa folda ahụ naanị Kmail.
Ọkachamara a nwekwara nhọrọ ndị ọzọ na-atọ ụtọ, dị ka:
Bubata faịlụ Mbox.
Bubata site na oS X.
Bubata site na opera.
Bubata site na Sylpheed.
Bubata site na Outlook Express.
Ndị ọzọ ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Bubata ozi-e Thunderbird na Kmail
Ekele Ezi Ndụmọdụ.
Ugbu a olee otu m ga-esi nweta mmetụta ahụ dị nro na ederede ederede nke OS OS?
Enwetụbeghị m ụdị Mac OS na ndụ m iji mara ihe ị na-ekwu site na Ezigbo Efect .. 😕 you nwere ike ịgwa m ihe ị bu n'uche?
Ezigbo Font ma ọ bụrụ na ị maghị ihe ọ bụ na obere na Ubuntu dịkwa na hel ị na-eme n'akụkụ ndị a.
Ikekwe, ọ bụrụ na ị na-asụ Spanish, elav M ga-aghọta gị nke mbụ.
Na agbanyeghị… elav, ọ na-ezo aka na "Font Smoothing", ya bụ, antialiasing na fon.
Amaghi otu esi ebubata ozi na windo ibi mail na kmail?
N'ezie, nke ahụ ga-enyere m aka nke ukwuu.
Enweghị echiche. Enweghị m akụkọ banyere ụdị ahụ, ihe m nwere ike iche bụ ime ihe ndị a:
- M mepụtara akaụntụ IMAP ụdị Kmail na data Live Mail (Amaghị m ma ọ ga - ekwe omume ịme nke a).
- Ana m adọta ozi sitere na akaụntụ IMAP na akaụntụ mpaghara na Kmail.
Mana ana m agwa gị, amaghị m ma ọ ga-ekwe omume ime nke a.
@elav kedu nkesa Linux ị na-eji
Ọ nọghị ebe a ugbu a n'ọfịs, ọ ga-alọghachite echi. Anyway, aga m aza gi ya
Jiri LMDE (Linux Mint Debian Edition), ma ọ bụ naanị Debian.
Na nkọwa nke onye ọrụ ọ bụla ị nwere ike ịhụ ihe distro ọ na-eji, yana ihe nchọgharị ọ jiri nweta saịtị anyị, dịka ọmụmaatụ m na-eji ArchLinux + Firefox, ị na-eji Windows7 + Chrome, wdg. 😉
Ana m esi na Thunderbird kwaga KMail ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 2GB nke ozi ịntanetị, nke ahụ bụ ọtụtụ narị puku HAHA.
Enwerem 500MB SWAP n'ihi na echere m na m agaghi eji ya, enwekwara m 2GB RAM. Ekwesịrị m ịgbalite Nepomuk na Akonadi iji mee nke a n'ụzọ a pụrụ ịtụkwasị obi karị, enwekwara m SWAP n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 400MB richara ma RAM m na 1.6GB riri, damn nke a bụ ụjọ JAJAJAJAJAJA
Ọ dịla ihe karịrị afọ 3 kemgbe ị dere edemede a. Mana usoro ịbubata ozi ịntanetị sitere na Thunderbird ruo Kmail ka dịkwa mfe.
Daalụ maka nkuzi ahụ.
Emechara m nweta ozi ịntanetị m na Kmail. Ya mere, echere m na m ga-ewepụ Thunderbird.
Esi akpaaka-ugwu partitions na mmalite (the easy way)
KDE 3.5 ka di ... weputara KDE 3.5.13